အလံတစ်ရာနယ်မြေမှာ ပန်းဦးလွှတ်နေမှုပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စရပ်အပေါ် ဘယ်လိုအရေးယူမလဲ
20 Oct 2017 . 1:22 PM
မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့နယ်၊ အလံတစ်ရာနယ်ထဲက ကျေးရွာတစ်ချို့မှာ အမျိုးသမီးငယ်တွေအပေါ် ပန်းဦးလွှတ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်အပေါ်မှာ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့က ဖိဖိစီးစီး အရေးယူမှုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပန်းဦးလွှတ်မှုပြုနေတဲ့ကိစ္စမှာတော့ အလံတစ်ရာဆရာတော်ဘုရားဝင်စားသူလို့ ယုံကြည်ထားကြတဲ့ ခွန်တန်လို့ခေါ်ဆိုသူထံကို ဒေသခံမိဘတွေရဲ့သမီးပျိုတွေကို အပ်နှင်းစေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်သူမှ တိုင်တာပြုတာမရှိကြပါဘူး။ မိဘတွေက အရမ်းရိုးသား ယုံကြည်လွယ်တဲ့ တောသူတောင်သား တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ကြတယ်။ ယုံကြည်မှုအစွန်းရောက်သွားတာပေါ့။ နေအိမ်တစ်အိမ်က အပျိုမလေးတစ်ယောက်ကို သူသဘောကျတယ်ဆိုရင် မိဘတွေက သွားပို့ပေးတာ။ မိဘတွေကိုယ်တိုင်က ပါရမီဖြည့်တာလို့ ခံယူထားတော့ခက်တယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ သူမရှိဘူးလို့ ပြောသံကြားတယ်။ ကျွန်မတို့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ ဘာသာ၊ သာသနာကို သန့်ရှင်းစေချင်ပါတယ်။ အလံတစ်ရာဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်း သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါ။ သူ့ရဲ့သာသနာ့နယ်မြေကို မနစ်နာစေချင်တာပါ” လို့ သထုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မာမာခိုင်က ပြောပါတယ်။
အဆိုပါ ခွန်တန်ဆိုသူမှာ အသက်၂၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ယခင်က ကိုရင်ဘဝဖြင့် သံဃာတော်တစ်ပါးရဲ့ ဦးခေါင်းပေါ် ခြေထောက်တင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တာကြောင့် နိုင်ငံတော်သံဃနာယကအဖွဲ့က လူဝတ်လဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“၂၀၁၃၊၂၀၁၄၊၂၀၁၅၊၂၀၁၆ ခုနှစ် တောက်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တာ။ ဒီကိစ္စကို မွန်ပြည်နည်သထုံက လူတော်တော်များများသိကြတယ်။ သူက တစ်ကိုယ်လုံး တက်တူးတွေနဲ့လူပါ ။ ဖြစ်တဲ့နေရာကတော့ သထုံထဲမှာမှ တောရွာတွေအများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီရွာတွေထဲကမှ အလံတစ်ရာနယ်မြေဖြစ်တဲ့ ဘုရင့်နောင်ကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာမှ အတွင်း၆ရွာ၊ အပြင်၆ရွာ အုပ်စုဆိုပြီးထပ်ရှိသေးတယ်။ အတွင်း၆ရွာကနေကိုးကွယ်ကြတာ။ သင်္ဃန်းချွတ်ပြီး လူဝတ်လဲခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ ၂၀၁၅လောက်ကလား မသိဘူးဖြစ်ခဲ့တာ။ နောက်တော့ ကားမီးရှို့၊ဆိုင်ကယ်မီးရှို့တယ်။ အိမ်မီးရှို့တယ်။ သေနတ်တကားကားနဲ့လည်း သွားလာနေတယ်။ အဲဒါလည်း ကိုးကွယ်ကြတာ။ ဒီကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မှူး၊ စခန်းမှူး၊ နယ်လုံ၊ ခရိုင်မှူး အားလုံးအကုန်သိကြပါတယ်။ ပန်းဦးလွှတ်တဲ့ အရေအတွက်လည်း တော်တော်များနေပြီ။ ရာဂဏန်းနီးပါးလောက်တော့ ရှိလောက်ပြီ။ လမ်းလေးခွမှာ ၇ ရက် ၇လီ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ယူတာ။ ပြီးရင် ရက်ပိုင်းပေါင်း၊တစ်လပေါင်း နှစ်လပေါင်းပြီး နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ယူတာ” လို့ သထုံမြို့နယ် အမှတ်-၁ မဲဆန္ဒနယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲ့က ပြောပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဖိဖိစီးစီးအရေးယူမှုဆောင်ရွက်သွားမယ့်အပြင် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုလည်း ယနေ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးအပြီးမှာ ဒီကိစ္စအပေါ် အရေးမှုတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ယနေ့မှာ သတင်းမီဒီယာသမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဒေသခံတွေတချို့ကို အကျိုးအပြစ်နားလည်အောင် အရင်ရှင်းပေးရမယ်။ ဥပဒေချိုးဖောက်တာကိုတော့ လက်ခံလို့မရဘူး။ အခုပြောင်းတဲ့ ဥပဒေအရတော့ ၁၆ နှစ်အောက်ဆိုရင် မုဒိမ်းမှုပဲလေ။ သထုံက သံဃာထုတွေက အဲဒီကိစ္စကို မကျေလည်ဘူး။ ဒီကိစ္စကို အရေးယူဆောင်ရွက်မပေးရင်တော့ ဆန္ဒပြမယ်လို့ ပြောတယ်။ သူကတော့ ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာ မှန်းရခက်တယ်။ သူ့နောက်မှာတော့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိတယ်လို့ နီးစပ်တဲ့ဒေသခံတွေက ပြောကြပါတယ်” လို့ ဒေါ်မာမာခိုင်က ဆိုပါတယ်။
ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအပေါ် အလွှဲသုံးစားလုပ်ဆောင်နေသူကို အရေးယူမှုပြုလုပ်သွားမယ့်အပြင် ယင်းဒေသခံပြည်သူတွေကိုလည်း အသိပညာပေးမှုတွေ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ သထုံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောပါတယ်။
အထက်ပါကိစ္စရပ်ကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုလည်း အသက်အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်စာများ ပေးပို့ခြင်းများကြုံနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အလံတဈရာနယျမွမှော ပနျးဦးလှတျနမှေုပွုလုပျတဲ့ကိစ်စရပျအပျေါ ဘယျလိုအရေးယူမလဲ
မှနျပွညျနယျ သထုံမွို့နယျ၊ အလံတဈရာနယျထဲက ကြေးရှာတဈခြို့မှာ အမြိုးသမီးငယျတှအေပျေါ ပနျးဦးလှတျမှုပွုလုပျနတေဲ့ကိစ်စရပျအပျေါမှာ မှနျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ သာသနာရေးဝနျကွီးဌာနတို့က ဖိဖိစီးစီး အရေးယူမှုဆောငျရှကျသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
ပနျးဦးလှတျမှုပွုနတေဲ့ကိစ်စမှာတော့ အလံတဈရာဆရာတျောဘုရားဝငျစားသူလို့ ယုံကွညျထားကွတဲ့ ခှနျတနျလို့ချေါဆိုသူထံကို ဒသေခံမိဘတှရေဲ့သမီးပြိုတှကေို အပျနှငျးစခေဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
“ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသတျပွီး ဘယျသူမှ တိုငျတာပွုတာမရှိကွပါဘူး။ မိဘတှကေ အရမျးရိုးသား ယုံကွညျလှယျတဲ့ တောသူတောငျသား တိုငျးရငျးသားတှဖွေဈကွတယျ။ ယုံကွညျမှုအစှနျးရောကျသှားတာပေါ့။ နအေိမျတဈအိမျက အပြိုမလေးတဈယောကျကို သူသဘောကတြယျဆိုရငျ မိဘတှကေ သှားပို့ပေးတာ။ မိဘတှကေိုယျတိုငျက ပါရမီဖွညျ့တာလို့ ခံယူထားတော့ခကျတယျ။ လောလောဆယျမှာတော့ သူမရှိဘူးလို့ ပွောသံကွားတယျ။ ကြှနျမတို့ဖွဈစခေငျြတာကတော့ ဘာသာ၊ သာသနာကို သနျ့ရှငျးစခေငျြပါတယျ။ အလံတဈရာဆရာတျောဘုရားကွီးကလညျး သူတျောကောငျးပုဂ်ဂိုလျကွီးပါ။ သူ့ရဲ့သာသနာ့နယျမွကေို မနဈနာစခေငျြတာပါ” လို့ သထုံမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါမာမာခိုငျက ပွောပါတယျ။
အဆိုပါ ခှနျတနျဆိုသူမှာ အသကျ၂၅နှဈရှိပွီဖွဈပွီး ယခငျက ကိုရငျဘဝဖွငျ့ သံဃာတျောတဈပါးရဲ့ ဦးခေါငျးပျေါ ခွထေောကျတငျထားတဲ့ ဓာတျပုံရိုကျခဲ့တာကွောငျ့ နိုငျငံတျောသံဃနာယကအဖှဲ့က လူဝတျလဲခဲ့တာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
“၂၀၁၃၊၂၀၁၄၊၂၀၁၅၊၂၀၁၆ ခုနှဈ တောကျလြှောကျဖွဈခဲ့တာ။ ဒီကိစ်စကို မှနျပွညျနညျသထုံက လူတျောတျောမြားမြားသိကွတယျ။ သူက တဈကိုယျလုံး တကျတူးတှနေဲ့လူပါ ။ ဖွဈတဲ့နရောကတော့ သထုံထဲမှာမှ တောရှာတှအေမြားကွီးရှိတယျ။ အဲဒီရှာတှထေဲကမှ အလံတဈရာနယျမွဖွေဈတဲ့ ဘုရငျ့နောငျကြေးရှာအုပျစုထဲမှာမှ အတှငျး၆ရှာ၊ အပွငျ၆ရှာ အုပျစုဆိုပွီးထပျရှိသေးတယျ။ အတှငျး၆ရှာကနကေိုးကှယျကွတာ။ သင်ျဃနျးခြှတျပွီး လူဝတျလဲခဲ့ကွတဲ့ဖွဈစဉျကတော့ ၂၀၁၅လောကျကလား မသိဘူးဖွဈခဲ့တာ။ နောကျတော့ ကားမီးရှို့၊ဆိုငျကယျမီးရှို့တယျ။ အိမျမီးရှို့တယျ။ သနေတျတကားကားနဲ့လညျး သှားလာနတေယျ။ အဲဒါလညျး ကိုးကှယျကွတာ။ ဒီကိစ်စကို သကျဆိုငျရာမွို့နယျမှူး၊ စခနျးမှူး၊ နယျလုံ၊ ခရိုငျမှူး အားလုံးအကုနျသိကွပါတယျ။ ပနျးဦးလှတျတဲ့ အရအေတှကျလညျး တျောတျောမြားနပွေီ။ ရာဂဏနျးနီးပါးလောကျတော့ ရှိလောကျပွီ။ လမျးလေးခှမှာ ၇ ရကျ ၇လီ မင်ျဂလာဆောငျပွီး ယူတာ။ ပွီးရငျ ရကျပိုငျးပေါငျး၊တဈလပေါငျး နှဈလပေါငျးပွီး နောကျတဈယောကျနဲ့ ယူတာ” လို့ သထုံမွို့နယျ အမှတျ-၁ မဲဆန်ဒနယျ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါခိုငျခိုငျလဲ့က ပွောပါတယျ။
ဒီဖွဈစဉျအပျေါမှာ မှနျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့က ဖိဖိစီးစီးအရေးယူမှုဆောငျရှကျသှားမယျ့အပွငျ သာသနာရေးနှငျ့ ယဉျကြေးမှုဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီးသူရဦးအောငျကိုလညျး ယနလှေှ့တျတျော အစညျးအဝေးအပွီးမှာ ဒီကိစ်စအပျေါ အရေးမှုတှဆေောငျရှကျသှားမယျလို့ ယနမှေ့ာ သတငျးမီဒီယာသမားတှနေဲ့ တှဆေုံ့စဉျပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
“ဒသေခံတှတေခြို့ကို အကြိုးအပွဈနားလညျအောငျ အရငျရှငျးပေးရမယျ။ ဥပဒခြေိုးဖောကျတာကိုတော့ လကျခံလို့မရဘူး။ အခုပွောငျးတဲ့ ဥပဒအေရတော့ ၁၆ နှဈအောကျဆိုရငျ မုဒိမျးမှုပဲလေ။ သထုံက သံဃာထုတှကေ အဲဒီကိစ်စကို မကလြေညျဘူး။ ဒီကိစ်စကို အရေးယူဆောငျရှကျမပေးရငျတော့ ဆန်ဒပွမယျလို့ ပွောတယျ။ သူကတော့ ဘယျမှာရှိလဲဆိုတာ မှနျးရခကျတယျ။ သူ့နောကျမှာတော့ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှရှေိတယျလို့ နီးစပျတဲ့ဒသေခံတှကေ ပွောကွပါတယျ” လို့ ဒျေါမာမာခိုငျက ဆိုပါတယျ။
ဒသေခံတိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ ဘာသာရေးဆိုငျရာ ယုံကွညျကိုးကှယျမှုအပျေါ အလှဲသုံးစားလုပျဆောငျနသေူကို အရေးယူမှုပွုလုပျသှားမယျ့အပွငျ ယငျးဒသေခံပွညျသူတှကေိုလညျး အသိပညာပေးမှုတှေ ပွုလုပျသှားမယျလို့ သထုံလှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကေ ပွောပါတယျ။
အထကျပါကိစ်စရပျကို လိုကျပါဆောငျရှကျနသေူတှကေိုလညျး အသကျအန်တရာယျဆိုငျရာ ခွိမျးခွောကျစာမြား ပေးပို့ခွငျးမြားကွုံနရေတယျလို့ သိရပါတယျ။
ရေမွှေးတွေ အနံ့မပြောင်းဘဲ အထားခံအောင် ဒီလိုလေးသိမ်းကြည့်ပါ
by Htet Htet . 8 hours ago
Penshoppe Campaign Video ထဲက နေခြည်ဦးရဲ့ ဖက်ရှင်ကို ဘယ်လိုလိုက်ဝတ်ကြမလဲ။
by Ei Ei .2days ago
မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်ရောက်လာတဲ့ နာမည်ကျော် အဆင့်မြင့် ဆွစ် နာရီတံဆိပ် “Frédérique Constant”
by Htet Htet .2days ago
ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီပြီး ရေရှည်ပျော်ရွှင်နိုင်မယ့် အလုပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရအောင်
by yoelu .2days ago
အားလပ်ရက်ကို အသုံးချပြီး အောင်မြင်မှုဆုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ဒီလိုအကျိုးရှိရှိ ကုန်ဆုံးကြည့်မယ်
လိုအပ်နေတဲ့ နိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ
ဂျူဗင်တပ်စ်ရဲ့ နိုင်ပွဲဆက်နေမှုကို ရပ်တန့်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဂျီနိုအာ
နိုင်ပွဲကိုယ်စီ ရယူခဲ့ကြတဲ့ စပါး၊ မန်စီးတီးနဲ့ လီဗာပူးလ်
ရလဒ်ဆိုးတွေကနေ မရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်